कोरोना कहरः बजार नपाएपछि बाख्रालाई तेजपत्ता
विर्तामोड । विगत तीन दशकदेखि हात्तीपीडित गाउँको रुपमा चिनिदै आएको झापाको बाहुनडाँगी अहिले औषधीय गुणयुक्त तेजपत्ताको पकेट क्षेत्रको रुपमा परिचित छ । तर, कोभिड–१९ को महामारीले बजारमा असर परेपछि तेजपत्ता उत्पादन गर्दै आएका किसान मारमा परेका छन् ।
मेचीनगरको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ मा फैलिएको साविक बाहुनडाँगी गाविसमा करिब १ हजार किसानले आफ्नो खेतबारीमा तेजपत्ताको बोट हुर्काएका छन् । कोरोनाको डरले भारतीय व्यापारी नआएकोले किसानको उत्पादन बिक्री नभएको हो ।
चिया, मसला र औषधीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको तेजपत्ताको बोट हुर्किएको तेस्रो वर्षदेखि हरेक वर्ष तीनपटक यसको पात टिपेर उत्पादन गरिन्छ । सुगन्धित र स्वादिष्ट हुने भएकोले खानेकुरामा पकाएरसमेत यसको उपभोग हुने गरेको छ ।
मेचीनगर–४ आमडाँगीमा १५ विगाहा निजी जग्गामा चियाखेती गर्दै आउनुभएका व्यावसायिक किसान रबि नेपालले चियाको बोटलाई छायाँ दिन पाँच हजारभन्दा बढी तेजपत्ताको बोट हुर्काउनु भएको छ । बाहुनडाँगीमा १ सयदेखि १० हजार बोटसम्म तेजपत्ता हुर्काएका किसानको संख्या एक हजारसम्म हुनसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर, कति किसानले यसको खेती गरेका छन् र यसबाट के कस्तो लाभ भइरहेको छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारी तहबाट खोज भएको छैन ।
बाहुनडाँगीमा मात्र ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको तेजपत्ता वर्षेनी उत्पादन हुन्छ । बजारिकरण हुन नसकेर तेजपत्ता बोटमै खेर गइरहेको र कतिपयले बाख्रालाई घाँस खुवाउने गरेको पाइएको छ । वि.सं २०६७ देखि तेजपत्ता खेतीमा लागेका नेपाल बन्धु कृषि फर्मका सञ्चालक रबि नेपालले प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरेर प्रदेश नं. १ को अधिकांश बजारमा तेजपत्ताको विक्री गर्दै आएको बताउनुभयो ।
‘मैले घरेलु प्याकेजिङ उद्योग चलाएर बेच्दै आएको छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अधिकांश किसानले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुको तेजपत्ता नबिकेर बाख्रालाई घाँसको रुपमा खुवाइरहनु परेको दुःखलाग्दो अवस्था छ ।’ दशैँ, तिहार जस्ता चाडबाडका बेला विगतमा तेजपत्ताको माग ह्वात्तै बढ्थ्यो । यसपाली कोभिड–१९ को महामारीका कारण बजार सुस्ताएको हुँदा विगतको जस्तो भारतीय बिचौलियाहरु काँचो तेजपत्ता किन्न घरघरै नआएको स्थानीय किसानहरु बताउँछन् ।
किन्ने भारतीय व्यापारी नआएपछि हुर्किएको तेजपत्ता कि बोटमै खेर जान्छ, कि त बाख्रालाई घाँसको रुपमा खुवाउन बाध्य छन्, किसान । तेजपत्ताको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो रहेको हुँदा यसको बजार विदेशमा समेत खोज्न सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताउनुभयो ।
बङ्गलादेश लगायतका तेस्रो मुलुकमा नेपाली कृषि र जडिबुटीजन्य उत्पादनको निर्यात सम्भावना भएपनि नेपालले नै माग बमोजिमका बस्तु लैैजान नसकेको उहाँको भनाई छ । बङ्गलादेशमा नेपाली अदुवाको माग धेरै भएको तर निर्यातमा कठिनाई भइरहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
तेजपत्ता अहिले पनि भारतबाट आयात भइरहेको पाइएको हुँदा नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशी बजारमै बिक्री हुने वातावरण तयार पार्ने विषयमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने महासंघका प्रदेश अध्यक्ष खड्काले जोड दिनुभयो । तेजपत्ता उत्पादक रबि नेपालले बङ्गलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत त्यहाँका व्यवसायीहरुसँग तेजपत्ताको निर्यातका विषयमा कुराकानी अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘बङ्गलादेशका व्यवसायीहरुले बाहुनडाँगीको तेजपत्ताको नमूना मागेका थिए,’ निर्यातको सम्भावनाबाट उत्साहित भएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘उताबाट नमूना स्वीकृत भइसकेको छ, अब सामान पठाउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा काम अघि बढाउँदैछौँ ।’ दुबई, कोलकाता, दिल्ली र हैदराबादबाटसमेत यसको नमूना मागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला बन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले व्यवसायीहरुले आफ्नो पालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आएमा निर्यातको स्वीकृति दिइने बताउनुभयो । मेचीनगरबाट केही व्यवसायीहरु तेजपत्ताको निर्यात अनुमतिका लागि आउनुभएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
हात्ती आतङ्क उग्र बन्दै गएपछि बाहुनडाँगीमा हात्तीले नखाने र किसानलाई फाइदा हुने वैकल्पिक खेतीको रुपमा तेजपत्ता र चिया खेती विस्तार भएको स्थानीय सामाजिक अभियन्ता गोविन्द न्यौपानेले बताउनुभयो । अलिअलि गर्दै अहिले ठूलो मात्रामा खेती विस्तार भइसकेको हुँदा सरकारले किसानले उत्पादन गरेको तेजपत्ताको बजारिकरणमा सघाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
किसानले लगाएको धान, मकै, सुपारीलगायतका नगदे बाली भारततर्फबाट आउने हात्तीले सखाप पार्न थालेपछि उनीहरुले विकल्पको रुपमा तेजपत्ताको खेती गर्दै आएका हुन् । हात्तीले खेतीबाली नष्ट गर्न थालेपछि चिया र तेजपत्ता खेती गर्न विज्ञहरुले सुझाउन थाले । किसानहरुले धमाधम धान खेत मासेर कसैले चिया र धेरैले तेजपत्ता खेती शुरु गरेका थिए ।
तेजपत्ताको उत्पादन शुरु भएको एक दशक बितिसक्दा यसको प्याकेजिङ गर्ने बल्ल एउटा उद्योग खुलेको छ । चिया, सुपारीलगायतका नगदे बालीको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका रवि नेपालले नै तेजपत्ताको प्याकेजिङ गर्ने नेपाल बन्धु कृषि फर्म सञ्चालन गर्नुभएको हो ।
घरमै सञ्चालित प्याकेजिङ उद्योगमा स्थानीय १५ जना महिलाले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगमा मरिच, कागती र तेजपत्ताको प्याकेजिङ हुँदै आएको छ । दशैँको समयमा ५ हजार केजी तेजपत्ता प्याकेजिङ गरिसक्ने उहाँको योजना छ ।
छरछिमेकीले उत्पादन गरेको तेजपत्ता समेत किनेर उहाँले प्याकेजिङ गर्नुभएको छ । निकट भविष्यमा तेजपत्ता, बेसार, मरिच, अदुवालगायतका उत्पादन पिसेर धुलो उत्पादन गर्न मिल स्थापना गर्ने उहाँले बताउनुभयो । तेजपत्ता, मरिच जस्ता स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारिकरणमा सरकारको कुनै पनि निकायबाट अनुदान र प्रोत्साहन नपाइएको किसानहरुको गुनासो छ ।
समुद्र सतहबाट १०० देखि २ हजार ५०० मिटरसम्मको उचाईमा फस्टाउने तेजपत्ताको वैज्ञानिक नाम ‘सिन्नामोमम तामला’ हो । यसको सदावहार झुप्प पात हालेको रुख हुन्छ । झापाको बाहुनडाँगी भूबनोटका हिसाबले तेजपत्ता खेतीका लागि अनुकूल भएको बताइएको छ ।
भिटामिन ए र सीका साथै फोलिक एसिड नामक तत्व पाइने तेजपत्तालाई औषधीय गुणयुक्त मानिएको छ । क्यान्सर, मधुमेह र पेटसम्बन्धी समस्यामा यसको उपभोग फाइदाजनक हुने अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
सन् २०१६ मा जर्नल अफ बायोकेमिकल न्यूट्रिसनमा प्रकाशित रिसर्च रिपोर्टका अनुसार मधुमेहबाट पीडितले तेजपत्ता खाँदा उपयोगी हुन्छ । यसको सेवनले बोसोजन्य पदार्थबाट उत्पन्न समस्यामा फाइदा हुने र रगतमा ग्लूकोजको मात्रा सामान्य हुने शोधमा उल्लेख छ ।
कपर, पोटासियम, क्याल्सियम र आयरनजस्ता मानव स्वास्थ्यका लागि अति आवश्यक पोषक तत्व तेजपत्तामा पाइन्छ । कब्जियत र एसिडिटीको समस्यामा तेजपत्ताले औषधीकै काम गर्छ ।
आइतबार, १८ असोज, २०७७, साँझको ०७:४० बजे
कृषकको उत्पादन सिधै उपभोक्ताको हातमा जानुपर्छः मन्त्री आङ्बो
विराटनगर । प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु अब सिधै उपभोक्ताले पाउने गरी बजारीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले त्यसका लागि संयन्त्र बनाउने प्रकृया सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । मोरङको ग्रामथान